FILOHA LEFITRY NY ANTENIMIERAM-PIRENENA : Feno sora-baventy tsy mankasitraka azy ny arabe
Saika nahitana sora-baventy maneho ny tsy fankasitrahana ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena misahana ny faritanin’Antsiranana taty an-toerana ny marainan’ ny sabotsy 7 aprily teo. 10 avril 2018
Izy izay solombavambahoaka voafidy taty an-toerana. Tsiahivina fa nibahana tao an-tsain’ny mpanara-baovao ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana farany teo. Mpamadika, mpanao kolikoly, tsy ilaina sy ny maro hafa no voasoratra nibaribary tamin’ireo sora-baventy teny amin’ny arabe maromaro taty Antsiranana. Voasoratra mazava be teo ihany koa ny anaran’ity mpitondra fanjakana voafidy avy aty an-toerana ity.
Raha vao nahita izany ny mpitandro filaminana avy amin’ny zandary avy hatrany dia nampita izany tamin’ny prefet an’Antsiranana, izay fantatra fa nanohy ny diany ho any an-drenivohitra tamin’io fotoana io. Satria mifanandrify tamin’ny lalana ivezivezen’ity manamboninahitry ny zandary ity no nahitana ireo sora-baventy manakaiky ny Sicam. Nahitana izany ihany koa teny amin’ny lalana manakaiky ny madauto, tropicale, bazary la Scama, Morafeno sy ny maro hafa.
Tsy nahafaly ireo mpomba an’ity filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ny zava-nisy ka nihazakazaka avy hatrany izy ireo nanosotra loko teo ambon’ireo sora-baventy rehetra. Tazana tamin’izany ireo namana aman-tsakaizany, indrindra ireo mpanolotsainy ary ny parlemantera mpanampy azy.
Ankoatra izany dia azo ambara fa nifoha tamin’ny torimasony sady naneho fanombohana amin’ny fanoherana ny didy jadona ataon’ireo mpitondra fanjakana ny aty amin’ny tapany avaratry ny Nosy raha nangina hatramin’izay. Azo ambara fa tsy mankasitraka ny zava-misy ny voalazan’ireo soratra ireo ny mponina. Araka ny fantatra dia nahazo baiko ny hanao fisafoana amin’ny alina ny mpitandro filaminana aty Antsiranana, nanomboka ny alin’io sabotsy io. Mibaribary araka izany fa leo, empaka jadona, fanaparam-pahefana amin’ny endriny maro samihafa, kajo kolikoly ny vahoakan’Antsiranana.
Tsy takona afenina tamin’ny maro ny fahafantarana fa mifono kolikoly avo lenta ny fandaniana iny volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana farany teo iny. Ny fitiavan- tenan’ny mpitondra ankehitriny, mbola te hifikitra amin’ny toerana no andraisan’ny mpanara-baovao ny fandaniana iny volavolan-dalàna iny.
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (671) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021